Gudiga Doorashinka Soomaaliya oo Kulamo ka Wada Garoowe. – SBC
Posted by SBC Editor on Janaayo 21, 2018 Comments
Kullamadan oo ahaa kuwo qaatay waqtiyo kala duwan iyadoona kan koowaad ay la qaateen Guddiga doorashooyinku ururada dhallinyarada Puntland kuwaasi oo tallooyin iyo su’aalaba waydiiyay Guddiga doorashooyinka Qaran ee Soomaaliya oo muhiimad gaar ah siinayay figradaah gaarka ah ee Dhallinyarada ee ku aadan hanaanka Doorasho ee dalka lagu wado inay ka qabsoonto.
Sayid Cali Sheikh Maxamuud Guddoomiye ku xigeenak Guddiga Doorashootyinka Soomaaliya ayaa sheegay in wada tashiyadaani looga gol leeyahay sidii loogu Go’aan qadan laaha habka ay noqonaysa doorashada soo socota taasina laga heli karo ra’yiga Bulshada soomaaliyeed.
Haweenka oo door muhiim ah oo mmuuqda ku leh Bulshada dhexdeeda ayaa qayb ka ahaa wadatashiyada guddigu kula samaynaayaan bulshada rayidka ah Magaalada garoowe ee Caasimada Puntland ayna goob jog ka ahaayeen haweenka siyaasiyiinta ahi.
Gudigan ayaa wadatashiyo Noocan oo kale ah Horay uga soo sameeyay 24 Dagmo oo ka tirsan dalka iyagoona tagi doono dagmooyinka Qardho,Boosaaso iyo Gaalkacyo oo gaba gaba u noqonaysa safarkooda Puntland .